ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင် - ဝီကီပီးဒီးယား
(Paramount Pictures မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင်, တရားဝင်အမည်: ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင် ကော်ပိုရေးရှင်း သည်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၁၂ ခုနှစ်မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် Adolph Zukor မှရုပ်ရှင်များထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ဒုတိယမြောက်ရှေးအကျဆုံးလည်ပတ်စတူဒီယို (Universal Pictures ပြီးနောက်) နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမမြောက်ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရှယ်ယာအများစုကို ViacomCBS ကော်ပိုရေးရှင်းကပိုင်ဆိုင်သည်။
၎င်း၏တည်ရှိမှုပထမနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကုမ္ပဏီကို Famous Players Film Company ဟုခေါ်သည်။ Zukor ၏ပထမဆုံးလက်တွဲဖော်များမှာ Daniel နှင့် Charles Frohman တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင်သူသည်လူသိနည်းသောပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ Cecil B. DeMille (လူသိများသောပြဇာတ်ဒါရိုက်တာ Cecil B. DeMille) ပါ ၀ င်သောတံဆိပ်ငယ် Lasky Feature Play Company ၏ပိုင်ရှင် Jesse L. Lasky နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာ) ။
ယနေ့တွင် ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင် သည်တီဗီနှင့်ကေဘယ်ကွန်ယက်များအတွက်ရှိုးများနှင့်စီးရီးများထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူများထဲမှတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား ၁၂ မျိုးဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၅ နိုင်ငံရှိရုပ်မြင်သံကြားဌာနများတွင်နှစ်စဉ်နာရီပေါင်း ၅၅၀၀၀ ကို၎င်း၏အစီအစဉ်ကိုထုတ်ပေးသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင်သည် DreamWorks ဝယ်ယူခြင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင် သည်၎င်းသည်စီးရီးများထုတ်လုပ်ရန်ပြန်လာကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပါရာ‌မောင့် ရုပ်မြင်သံကြား (ယခု ပါရာ‌မောင့် ရုပ်မြင်သံကြား စတူဒီယိုများ) ၏လုပ်ဆောင်ချက်များပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်၎င်း၏ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်သာဖြန့်ဝေရန်ပထမဆုံးအဓိကဟောလိဝုဒ်စတူဒီယိုဖြစ်ခဲ့သည်။
↑ The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires - Tim Wu.
↑ Richard Abel: The Ciné Goes to Town: French Cinema, 1896–1914, University of California Press, 1994, p. 10, ISBN 0-520-07936-1.
↑ Geraldine Fabrikant, Sharon Waxman: Viacom's Paramount to Buy DreamWorks for $1.6 Billion, "The New York Times", 2005-12-09, ISSN 0362-4331.
↑ Viacom revives Paramount Television studio, eyeing multiple platforms, Los Angeles Times, 2013-07-23.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါ​ရာမောင့်ရုပ်ရှင်&oldid=728105" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။